Movie | Danya Wadi
By danyawadi March 15, 2020 Leaveacomment
VOA ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) 14 မတ်၊ 2020 ​ဒေါ်ခင်မျိုးသက် တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ရခုိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ဒုက္ခသည် အများအပြားရှိတဲ့ထဲက ၂၀၁၂ အရေးအခင်း မှာ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ် ကနေ မြန်မာနုိုင်ငံထဲကို ပြန်လည် ခိုလှုံလာတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ပါပါတယ်။ ထောင်နဲ့ချီ တဲ့ဒီရခုိုင်တုိုင်းရင်းသားတွေ ဘာအခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါသလဲ။ ဒေါ်ခင်မျိုးသက် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ထားပါတယ်။ လင့်၊ https://burmese.voanews.com/a/5328160.html
By danyawadi February 24, 2020 Leaveacomment
By danyawadi February 15, 2020 Leaveacomment
သက်သေအထောက်အထားမပြသနိုင်တဲ့ လှေစီးဒုက္ခသည် ရိုဟင်ဂျာ ၅၀ နီးပါးဟာ ပုသိမ်မြို့နယ် ပေါက် လှဂျိုင်ကျေးရွာအနီး ပင်လယ်မှာ မနေ့ညပိုင်းတုန်းက တပ်မတော်ရေက ဖမ်းဆီးတာခံခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ကို ဘယ်ကိုဆက်ပို့ရမလဲဆိုတာကို ညွှန်ကြားချက်စောင့်နေတယ်လို့ ပုသိမ်မြို့နယ် မကျီးဇင် ကျေး ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်သိန်း ကပြောပါတယ်။ “ပင်လယ်ပြင်မှာမိတဲ့ ကုလားတွေက ကျနော်တို့ဘယ်နှစ်ယောက်မှန်းလည်းမသိဘူး၊ ၄၈ ယောက်လို့ လည်း ပြောတယ်၊ အဲဒါကိုတပ်မတော်ရေတပ်က ထိန်းထားတယ်ခင်ဗျ၊ သူတို့အပေါ်ကအမိန့်ကိုစောင့်နေတယ်၊ ပြန်ပို့ဆိုလည်းပို့မယ်၊ လွှဲပြောင်းပေးဆိုလည်း လွှဲပြောင်းပေးမယ်ပေါ့၊ လက်ရှိအနေအထားကတော့ အဲဒီ လိုပဲ” ဒီလှေစီးဒုက္ခသည် ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူကုန်ကူးလာတဲ့ပွဲစား ငါးဦးကိုလည်း ပေါက်လှဂျိုင်ကျေးရွာမှာ ဖမ်း ထားတယ်လို့ ဦးမြင့်သိန်း ကပြောပါတယ်။ ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဒုက္ခသည်စခန်းတွေကလား၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်နေရာရာက ထွက်လာ သူတွေလားဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေဟာ […]
By danyawadi February 11, 2020 Leaveacomment
Secret footage and eyewitness accounts shine new light onabrutal campaign by the Myanmar military against Rohingya Muslims — an effort that has been described by both the United Nations and the United States as “ethnic cleansing.” Source: https://www.pbs.org/…/frontli…/film/myanmars-killing-fields/
By danyawadi February 7, 2020 Leaveacomment
European Union on Myanmar – Security Council Media Stakeout (4 February 2020)
By danyawadi February 5, 2020 Leaveacomment
United Nations 2020.02.04 Informal comments to the media by the Representative of the European Union of the Security Council to the United Nations, on behalf of the European Union members of the Security Council on the situation in Myanmar. Link :https://www.youtube.com/watch?v=lZ1l3DP4sxo
ICJ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ထိပါးရာ မရောက်ဟုဆို ( ဦးရဲထွဋ် )
By danyawadi January 26, 2020 Leaveacomment
MCN TV NEWS CHANNEL ❖ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး (ICJ) ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိပါးရာ မရောက်ဘူးလို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။❖ ဒီလိုပြောဆိုနေမှုတွေဟာ စိုးရိမ်မှုအပြင် နိုင်ငံရေးအရ လက်ရှိအာဏာရနေတဲ့အစိုးရကို တိုက်ခိုက် ချင် တဲ့သဘောနဲ့ ပြောတာဆိုနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း သူကဆိုတာပါ။ ❖ ဒါပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ရင်တော့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် နယ်မြေတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ အကြပ်အတည်း ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်း သတိပေး ပြောကြားထားပါတယ်။ ❖ အပြည့်အစုံကို MCN သတင်းဌာနရဲ့ “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ” အထူးအစီအ စဉ်မှာ ရှုစားနိုင်ကြမှာ […]
DVB – အိုင်စီဂျေ ကြားဖြတ်အစီအမံ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် သုံးသပ်ချက် စကားဝိုင်း
ဆွေးနွေးသူများ၊ (၁) ဦးအေးလွင်၊ (ကိုဖီအာနန် ကော်မီရှင် အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း) (၂) ဦးအောင်မျိုးမြင့် ( ညီမျှခြင်းမြန်မာ – အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ) လင့်၊https://www.youtube.com/watch?v=p3hmsHav1Sk
CNN 25.01.2020 Simon Adams, Executive Director for the Global Centre for the Responsibility to Protect, joins CNN International to discuss the UN’s historic court ruling that Myanmar must prevent genocideSource: CNN. Link: https://edition.cnn.com/videos/tv/2020/01/25/exp-simon-adams-clip.cnn